Maxaad Sameyneysaa Haddii Xaaskada Ay Si Wali Ugu Waalan Tahay Soo Sameysashada Shopping-ka | alcarabiya.com
Home » Arimaha Qoyska » Maxaad Sameyneysaa Haddii Xaaskada Ay Si Wali Ugu Waalan Tahay Soo Sameysashada Shopping-ka
Maxaad Sameyneysaa Haddii Xaaskada Ay Si Wali Ugu Waalan Tahay Soo Sameysashada Shopping-ka
Mararka qaar haweeneyda waxa ay yeelan karata ceebo ,balse jaceylka ninka uu u qabo iyo kalsoonidiisa ku aadan in uu awoodi u leeyahay in uu ka bedelo ceebahaas taasi ayaana gacan ka geysaneysa in xariirkii uu dhameystirmo.
Balse guurka ka dib ayuu ninkii dareemayaa saameynta ceebahaas ku leeyihiin xariirka nolosha waxaana ka mid ah ceebahaas hadii xaasku ku waalan tahay soo adeegsashaad (Shopping) qaab ka bad badis ah , hadaba maxaad sameyneys a, alcarabiya ayaa xal macquul ah ku haysa.
Marka hore qiimey dabeecadaha dalabaadkeeda adiga oo bar bar dhigaya awoodahaada ,, sidoo kale waqti u sameeyso in aad wada qaadataanlabadiina waxaa laga yaabaa ka fogaanshahaada in iyada uu ka yeelayo in ay u baahato in suuqa ka so dukaameysato sabab la xariira cidlada .
* ka taqalus caadadisyada neerfoosnimada xagaada … oo waqti qaado waayo marka aad wel welka ka taqalusto waxaa laga yaabaa in aad dareento in lamaantaada aysan ka bad-badin dalabaadyadeyda .
* Ogaaw ninyahoow in lamaantaada aheyn midda dalbaka keeneysa balse heerkeedii dhaqalaha ka hor guurkiina ayaa laga yaabaa in uu u saamaxayay soo adeegashada badan , markaa ka dib isku day in aad la hadasho una muujiso in awoodahaada xamili karin arintaas.
Haddii aysan kugu ogalaan heerkaada dhaqaalaha ,,adiga qalad kuma lihid markaas waxaad siisaa in ay kala doorato in heerka noloshaada kuula ojogto ama in ay dib ugu laabato nolosheedii hore ee adeegashada badneyd .	* waligaa haka dhigan arintaan in ay gaarto qoyskaada , waxaa ugu daran ee lamantaada ka careysiin kara waxa ay tahay in qoyskaada fikrad qaldan ka aaminaan , hadaad sidaas sameysana waa qasab qosykaada faraha ayay idinla soo galayaan markaas ayay dhaleeceynayaan lamnataada .
* haddii lamaantaada arimaahaan ay u sameneyso hinaaso ku adan saaxibadeeda ama dariskeeda si degan ugu sheeg in qoys waliba miisaniyad iyo daruufo dhaqaale gaar ah leeyihiin , una sheeg in dhaqankaas iska joojiso .
3 Responses to Maxaad Sameyneysaa Haddii Xaaskada Ay Si Wali Ugu Waalan Tahay Soo Sameysashada Shopping-ka	http://essayacademy.org/ Reply
May 25, 2013 at 12:17 pm	Nice effort, very informative, this will help me to complete my task. Thanks for share it keep it up. thanks
January 7, 2013 at 6:42 am	Waa laguu hayaa naag gaaljecel..
January 6, 2013 at 6:29 am	Wax i waso meeshaan ma joogaan dhalinteena waxaa kaga leh jameykan uganda tanzania oo ayaga afyarta jecel